Madaxwayne Taageerada Soomaali Oo Dhan Waad Helaysaa ‘Hadii aad Diyaariso Aqalkii Odayaasha Iyo Dhamaystirka Dowlad Goboleedyada’ | http://kismaayodaily.com
Marka hore, waxaan ALLAHA wayn uga baryaayaa intii ku dhimatey werarkii xaqdarada ahaa oo ay nimankii afka duuban jiray ku soo qaadeen Baarlamaanka Soomaaliya, in uu ALLAHA waxidka uu janadiisa ka waraabiyo. Sdioo kalene, inta dhaawaca ahna uu ALLAHA waaxidka uu dhaawacooda u boogadhayo. Mida xigta, waxaa iyaga salaan, sharaf iyo aqoonsi mudan ciidamadii ka hortegy nimankii la marin habaabiyey ee u soo qalab qaatey in ay naf ALLAH uu ka xarimay dhiigeeda daadiyaan.
Aan u soo noqdo muhimada qoraalkayga, isku duubnida maanta oo kale loo bahan yahay, waxaa horseed u ah madaxwaynaha qaranka hadalkii uu ka siidaayey Radio Muqdisho, kaas oo aad dareymaysid qiirada iyo qaayaha ku dheehan, kaas oo aad ka dareemaysid sida uu uga damqadey dadkii ku nafwaayey weerarkaas xaqdarada ah, waa kan ee hadalkiisa halkaan ka dhagayso: http://radiyomuqdisho.so/madaxweynahawaxaan-rabaa-inaan-ummadda-u-sheego-in-isbedel-dhacidoono-saacadaha-soo-socda-dhageyso/.
Had iyo dan, waxa nala gudboon madaama lagu jiro tacsida dadkii werarkaas xaqdarada ah ku nafwayey iyo tacsida geesiyadii difaaca dadka Soomaaliyeed naftooda ku waayey, waa in aan madaxda dalka u cadayno in ay haystaan taageeradeena oo buuxda.
Iyadoo ay taas jirto, waan in madaxwaynaha uu ogaado in la xisaabtamo in aysan xumayn, lagulana xisaabtami doono mustaqbalka waxaa uu qabto iyo waxaa uusan qaban. Mida ugu wayna ay tahay, in la gaaray in la taliyaasha ay ahaadaan dad aaminsan in Soomaaliya ee leedahay Soomaali oo dhan.
Horay ayey siyaasiyiin, aqoonyahano iyo waxgaradba uga hadleen in aysan Soomaaliya jifo keli ah ama koox yar oo isbahaystey aysan lahayn. Marka wadanka iyo danahiisa, ha ahaato maarayntiisa iyo hogaankiisa, madaxda dalka, oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha Dowlad Federaalka, waxaa uu ka dhexeeyaa Soomaali oo dhan. Marka difaaca ee iscasilayna, wuu soo daahay iscasilkiisa madaama marar badan lagu eedeeyey in uu ka mid yahay kooda hortaagan geedi socodka nabada, waa sida ka laga weriyey, waqtigii ay socotey waanwaantii Jubbaland.
Madaxwayne, waad haysataa taageerada dad waynaha Soomaaliyeed, ee diyaari dhisida aqalkii odayaasha iyo dhisida maamul goboleedyada madaama ay tahay rabitaankii dadwaynaha Soomaaliyeed, sida ku cad dastuurkii ay dhamaan odayaasha Soomaaliyeed asaxiyeen, adiga oo aan kursiga maanta aad fadhido ku haminayn. Madaxwayne, xaq dhowr dastuurka iyo rabitaanka dadwaynaha, markaas ayaad heli doontaa taageerada buuxda ee dadwaynaha Soomaaliyeed, gaarsiina doonta dadwaynaha Soomaalliyeed halka aad la damacsan tahay inaad gaarsiiso.
Waxaa soo direy: Mohamed Barre – Junlay “Buluf”, qoraa madaxbanaan, waxna la qora arimaha Soomaalida, degana Minneapolis, MN – Junlay99@aol.com
Kismaayodaily On May - 25 - 2014